Harargee Lixaa: Jiraatonni rakkoo Bulchiinsa gaarii hamaaf saaxilamneerra jedhu - BBC News Afaan Oromoo
Harargee Lixaa: Jiraatonni rakkoo Bulchiinsa gaarii hamaaf saaxilamneerra jedhu
Dr. Nagarii Leencoo
Jiraattotni godina Harargee Lixaa rakkoo bulchiinsa gaarii hamaaf saaxilamneerra jechuun komatan.
Jiraattoonni godinichaa dubbisne akka jedhanitti, gaggeesitootni kanaan dura taayitaa irra turan faayidaa uummatichaaf hojjechuurra dhiibbaa garaagaraa geessisaa turan jedhan.
Sadarkaa godinaatti bulchaan godinaa fi itti aanaan bulchaa hojiirra hin jiran. Amma qeerroo fi gaggesitootuma haaromsaatu nageenyasaa eegsifachaas, hojjechaas jira jedhan namni dubbisne tokko.
Kunis erga gaggeessan duraan aangoorra ture ka'ee booda, namootni taayitaa barbaadan bakka qabachuuf yaalii gochaa turan irraa kan ka'e rakkinni naannichatti akka uumame himu.
Dabalataanis hirmaatota keessaa namni maqaansaa akka dhahamuu hin feene tokko BBC'tti akka himetti, jiraattoonni rakkoo hawaas dinagdee heedde turaasaafi gaggeesitootni Harargee Lixaatti taayitaarra turan namoota ajjeesisaa fi hiisisaa turan jedhan.
Wayita amaa kanattis mormiin guddaan qaamoolee haaronsaaf qabsaa'uun aangga'oota duraa taa'yitaaraa busuuf yaalanii fi kanneen aangoorra turuu barbaadan jidduutti ta'us himaniiru.
Dhimma kana furuufis itti aantuun Pirezedaantii Naannoo Oromiyaa Addee Xayibaa Hasan Magaalaa Cirootti kutaalee hawwasaa garaagaraa waliin mari'ataa jiru.
Kaayyoon marichaa inni guddaanis rakkoo bulchiinsa gaarii godinicha keessatti mul'ate furuuf jecha mariin kun kan jalqabe.
Kanaafuu haala qabatamaa wayita aammaa godinicha kessatti mul'atuuf fallii gaariin hoggansa ummanni jaalatuufi filatee muduudhas jedhaniiru jiraataan kun. Fedhii fi sagalee ummataa dhagahuun rakkina gara fuladuraatti mudachu malu ni hambisas jedhaniiru.
Bulchaan godina Harargee Lixaa dhiyeenya kana ramadamanis akka hin hojjanneef dhiibbaawwan garaa garaa irratti taasifamu isaatiin hojii dhiisanii akka deebii'an taasifamuu Dr Nagarii Leencoo Itti gaafatamaan Biiroo dhimmoota Komunikeeshinii Naannoo Oromiyaa himaniiru.
Kunis namootni qaamuma siyaasa kanaa tahanii aangoo barbaadan akka jiranii fi duula gaggeessaa turan akka jiran himaniiru.
Haalli kunis qaama gurmaa'etu akka hojii hin jalqabneef hanga lubbuu balleessuutti qindaa'ee hojjechaa ture jedhan Dr Nagariin.
'Manaafi beeylada nurraa gubaniiru'
Ummanni Godina Hararge Lixaa akkuma ummata Oromoo bakka biraatti gaaffii bulchiinsa gaarii, gaaffii misomaa fi dinagdee kaasaa tureera kan jedhan Dr Nagariin, Motummaanis gaaffii ummatichaa dhaggeefachuun furmaata itti kennuuf yeroo hojjachaa jiruudha jedhan.
Bulchaan godinichaa duraanii waan aangoorraa bu'aniif, amma motummaan nama ni hojjata jedhee itti amane bakka buuseera.
Haa ta'u malee, akkuma bulchaan haaraan mudaman aangoo fudhachuun hojii eegalanitti, qaamni caasaadhuma mootummaa keessa jiru rakkoo umamiin hojii silaa irraa eegamu hojachuu dadhabuu himaniiru.
Haalli gama Kanaan godina kanatti raawwatamees godinaalee Oromiyaa kamiittuu raawwatamee kan hin beekne fi waan sirrii hin taaneedha jedhaniiru.
Haaluma kanarratti ummata waliin mari'achuun fala barbaachaaf mariin ammaa kunis eegalamuusaa himaniiru Dr Nagariin.
Ummanni gaaffii gaafachuuf mirga qaba akkasuumas hoggansi isaaf hin taanee taanaanis akka ka'uuf gaaffachuuf mirga qaba kan jedhan itti gaafatamaan kun, haa ta'u malee gaaffii ummtaa fakkeessuun dheebuu aangoo bahuuf yaaluun yakka jedhaniiru.
Namni mudame tokkkos osoo akka hojataniif carraan hin kennamiiniif, attamiin gahumsi isaan qaban beekamuun akka isaan hin bulchiineef gaafachu danda'ama?
Kanaafuu, adeemsaa fi caasaa kanas mootummaan sirriitti waan hubateef hundumtuu karaa seeraatiin hiikama jedhaniiru.
Kan nuti barbaannu malee kun aangoorra hin taa'u, isaan kaanis ana malee aangoo qabachuun hin danda'an jechuun seera cabsuudha.
Seerri yoo cabu ammoo kan miidhamu ummata hunda waan ta'uuf wal dhaggeeffachuu fi tasgabbiin dhimmicha ilaaluun fala waaraa ta'uu himaniiru.
Ummanni godinichaa ammoo ummata jaalalaa fi sabboonummaa malee shira akkaanaatiin hin beekamne maqaa xurreessuun dhaabbachu qabas jedhaniiru.
Humnoonni mootummaa magaalaa seena qabeettii Laalibalaa to'achuu himan
'Daawwannaan kiyya deeggarsa Chaayinaan mootummaa Itoophiyaaf qabdu agarsiisa' -Waang Yii
Addunyaarratti magaalaan keessa jiraachuuf qaalii ta'e barame
TPLF hidhi Takazee haleelameera jedhus Humni Ibsaa Itoophiyaa garuu soba jedhe
Ministirri muummee haadha warraa isaa ajjeesuun shakkame himatame
Dhaabbanni Twitter sagalee deeggartoota Itoophiyaa qajeelfamasaa cabsan haquu mirkaneesse